အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်: ဆန်းကျယ်တဲ့ မေတ္တာ
18 Responses to “ဆန်းကျယ်တဲ့ မေတ္တာ”
ဒါမျိုးဆန်ဆန် ဖြစ်ရပ်တစ်ခု ကြုံဖူးပါတယ်။
လက်တွေ့ထက်ဆန်းတဲ့ ဖြစ်ရပ်တွေက ရှိတတ်ပါတယ်။
Love has No Length and Wide. But, Love has Forward and Reverse Directions.
မြန်မာပြည်မှာဆိုရင်တော့ အလှုလုပ် ရေစက်ချ အမျှဝေ လိုက်တာပေါ့။
သူတို့ အနောက်တိုင်းမှာဆိုရင်တော့ ဘယ်လိုလုပ်လဲ မသိဘူးနော်။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်... လူမမာအမျိူးသ္မီး ကံကောင်းသွားတာပေါ့. :)
မိဘရဲ့ မေတ္တာဟာကြီးမားသလို သားသမီးမေတ္တာဟာလဲ မိဘတွေအပေါ်ကြီးမားတတ်ကြပါတယ်။
မမြင်နိုင်တဲ့ စိတ်စွမ်းအင်တွေဟာ ဘ၀ခြားပေမဲ့ ဆက်စပ်မှုတော့ ရှိနေတယ်ဆိုတာ ဒီပုံပြင်လေးက ပြသပေးလိုက်တဲ့သဘောပါဘဲ။
အဲဒါ အချစ်မေတ္တာရဲ့ဆန်းကြယ်မှုဆိုတာကို လက်ခံပါတယ်..
ကောင်းရာမွန်ရာ လားပါစေ ကောင်မလေး ငယ်..
မေတ္တာဆိုတာ တကယ့်ကိုပဲ ကြီးမားပါတယ်...
ချောရေ ဒီပိုစ့်လေးကို ကိုယ်ဖြစ်ရပ်ဆန်းကြယ်မဂ္ဂဇင်းတစ်စောင်မှာ ဖတ်ဖူးတယ် ကြာတော့ကြာပြီ။ kotunygn ပြောသလိုပဲ အလျားအနံပေတံမရှိတာ အဲဒီဆန်းကြယ်တဲ့မေတ္တာပဲနော်။ ခုပြန်ဖတ်ရတာလေးကို ပြန်ခံစားသွားတယ်။ ကျေးဇူးပါပဲ။ သယ်ရင်း ကျန်းမာပျော်ရွှင်ပါစေ
အမလည်း တနေရာ မှာ ဖတ်ဘူးတယ် ဒါပေမဲ့ ပြန်ခံစားသွားတယ် ကျေးဇူးပါ
ကောင်မလေးက သူ့အမေကို သိပ်ချစ်တာနေမှာဗျာ....။
အလျားအနံ မရှိပေမယ့် အသွားအပြန်နဲ့ စီးဆင်းတတ်တယ်
ကြိုးနဲ့ နှောင်ခြင်းမရှိ ပေမယ့် နှောင်ကြိုးတွေ တသီကြီးနဲ့ ရစ်တွဲနေတတ်တယ်
သံသယဖြစ်စရာမလိုပါဘူး.....မေတ္တာတရား ရဲ့ နက်ရှိုင်းတဲ့ သဘောတရားတွေရဲ့နောက်..မှာ
စာစုကောင်းလေးတစ်ခုပါပဲ..သမီးကနေ အမေအတွက် ဆိုတာမျိုးကတော့ အခုမှဖတ်ဖူးတယ်
အမေက သမီးအတွက် ဆရာလာပင့်တာ ကတော့ အရင်က ဇာတ်လမ်းတစ်ခုမှာ မိဘမေတ္တာကို ဖော်ညွှန်းသွားတာ ကြည့်ဖူးတယ်...ကျေးဇူးပါခင်ဗျာ
ဖတ်ပြီး စိတ်မကောင်းဘူး...။ မေတ္တာရဲ့ တန်ခိုးတွေပေါ့နော်..။
Woww.... Terrific Great !!! :) the power of love is so wonderful
မမရေ...ဖတ်ပြီး ကြက်သီးတောင်ထတယ် (အထင်မလွဲနဲ့ဦးနော် ကောင်မလေးကိုကြောက်လို့ ကြက်သီးထတာ မဟုတ်ဘူး...မေတ္တာတရားရဲ့ ဆန်းကျယ်မှုကို ကြက်သီးထတာ)
အဲလိုကမ္ဘာရှိရင်အမ မောင်လေးကိုပြောအုံးနော် သွားနေချင်လို့--
စိတ်မကောင်းစရာနော် .....း(
လေးစားဖို့ကောင်းတဲ့စိတ်ဓာတ်ပါပဲ....ယုံကြည်ပါတယ်ဇာတ်လမ်းထဲက မိန်းကလေးက..Angel ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်...
Motorcycle Trikes said...
Certainly i'm impressed from this publish. The individual who produce this submit it wasawonderful human. Thanks for shared this with us.
မိမိဦးနှောက် ဘယ်လောက်တောင် ထိန်းချုပ်နိုင်စွမ်း ရ...